Cineplayer waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan for Windows Media Player in decodes DVDs u tayo sare video loo maqli karo. Haddii aad raadinayso wax aad Mac sida, laga yaabo in aad qabto dhibaato, sida waxaa jira barnaamijyo aad u yar in la shaqeyn doono Mac ah. Dhab ahaantii, CNET ee caanka ah software page dib u eegid, download.com, ma laha barnaamijyada decoder Mac DVD oo dhan. Waxaa laga yaabaa in si fiican ay u helaan xijaab Windows iyo barnaamijyada ku dari u.
Halkan waxa ku jira toban barnaamij oo aad ku shuban karto in aad Mac in xijaab Windows ah. Barnaamijyadan waxay ka dhalisay qaar ka mid ah ratings wanaagsan, sidoo kale.
Barnaamijkan freeware sidoo kale waa doofaar khayraad, wax ma dhici iyadoo qaar ka mid ah ciyaartoyda kale ma. Waxaa ku jira codecs iyo sida diirada si heeso iyo filimaan soo celin si fiican u ciyaari karo. Waxa uu awood u leeyahay inuu u ciyaaro daraasiin noocyada file, sidoo kale, iyo sidoo kale VCDs, BluRays, DVD-HD, iyo XCDs. Its kelmadaha audio ka taga ilaa rikoodh aasaasiga ah jidka oo dhan ilaa 7.1. Haddii aad xiran habka guriga audio ah, kuwaasoo ah idinka dhigay karo wax soo saar si aad u xamili Dolby Digital. Daabacayaasha hayn barnaamijkan updated si joogto ah, si farsamooyinka cusub ee lagu sii daayo, taas awood u yeelan doonaan inay sii.
Dhammaan tufaax soo preloaded la soo saarka Apple sida QuickTime, iyo barnaamijkan kuu ogolaaneysaa in aad si loogu badalo aad files QuickTime si kala duwan oo ah qaabab kale. QT Converter yimaado la version ah tijaabo lacag la'aan ah si aad u aragto haddii aad u jeclaan hor inta aadan iibsan nooca buuxda. Waxay qaban karaa beddelaad u audio iyo video files, oo ay ku jiraan .mp3, .mp4, wmv, iyo DivX. Waxaad dib ugama noqon karo files si aad u haboon ee tiro ka mid ah telefoonada gacanta oo ay ku jiraan shiddaa, telefoonada Android, iyo iPads. Waa barnaamij degdeg ah, si aadan aad walwalo aad computer la xidhxidhay muddo dheer.
Barnaamijkan wuxuu ku siinayaa maxkamad free shan iyo toban maalmood ah si loo arko haddii aad rabto in aad isticmaasho. GetGo badalo karaa ugu videos-qeexidda sare (720p iyo 1080p) in ay arki qaar ka mid ah qalabka la qaadi karo, oo ay ku jiraan Microsoft Zune ah, PlayStation qaadan karo, iyo qalabka Apple. Waxaad clip karaa filimka in la baabi'iyo guutooyinkii madow sidaa daraadeed waxa uu ku haboon oo ku saabsan screens yar ka fiican. Waxa kale oo ay ka qabtaa banaan screen iyo qabsado gacanta ku mugga. Ma rabtaa inaad jiid wadada audio clip ka ah? Waxaad samayn kartaa in, sidoo kale. Way fududahay in la isticmaalo iyadoo asal ahaan saddex keli ah tallaabooyinka loo baahan yahay si loogu badalo faylkaaga.
4. Free badalo MP4
Barnaamijkan in tiro ka mid ah qaabab kale, oo ay ku jiraan FLV, AVI, iyo wmv badalo doonaa .mp4. Waxa kale oo bilaash ah, si aad isku dayi kartaa waxa iska bixi oo isticmaalaan dhowr siyaabood oo aan ka werwerayn oo ku saabsan soo baxeen waqti. Waxay leedahay interface fiican la badhamada sahlan loo akhriyi karo. Waxa kaliya qaadataa xoogaa tallaabooyin ah si loogu badalo faylasha aad, iyo aad dooran kartaa in aad xaalkaa ku video iyo tayada audio. Waxaa jira fursado in la beddelo heerka bitrate iyo jir ah sidaa darteed waxaa wanaagsan ka ciyaari doono qalab yar aad.
5. EZ jilicsan DVD in iPod Converter
Barnaamijka waxa uu u suurtogelin doonaa si loogu badalo DVD aad u qaab si fudud u ciyaaray aad iPod, iPad, ama iPhone. Waxaa sidoo kale ku wareejin karo files soo galeen Lugood si toos ah, si fudud oo sax ku calaamadee hal sanduuq. Diinta DVD waxaa loo sameeyaa qaab MPEG4 ama aasaasiga ah 640 X 480 for loo maqli karo ee aaladaha yar yar. Tani version qeexidda caadiga ah ee barnaamijka waa lacag la'aan. Barnaamijka ayaa qoreysa interface ah waa u fududahay in ay fahmaan oo ay isticmaalaan, xitaa bilowga ah, iyo gartaan qalabka waxaa lagu dhisay barnaamijka si aadan in aad file kale. Waxaad dooran kartaa si loogu badalo ka mid ah oo kaliya cutubka, ama filim oo dhan.
6. badalo X in DVD
Barnaamijkan aadka loo qiimeeyo kala Timid tijaabo ah oo lacag la'aan ah, laakiin version maxkamadda dhigeysa watermark ah aad video on. Waxay leedahay fudud ah si ay u fahmaan interface si aad ku qori kartaa faylasha aad barnaamijka, iyaga xaalkaa sida aad rabto, ka dibna iyaga gubi in disc. Qaar badan oo ka mid ah goobaha ay yihiin horena, si aad u hesho isla markiiba socda, ama aad gacanta qabsato karaan goobaha ay waxyaabaha sida muuqa iyo iftiin. Waxa aad ku qori kartaa in lagu calaamadiyo, cutubka gacanta haddii aadan rabin in dhammaan noqon dhererka isku mid ah. DVD-yada waxaa la dhammeeyey isagoo qaab la sheegay in dib u soo ciyaaray kartaa DVD wax sidaa inaad si fudud aad la wadaagi karto.
Shaki la'aan, tani waa mid ka mid ah ciyaartoyda loogu jecelyahay saxaafada halkaas ka badan konton milyan oo downloads. Waxaa ciyaari karaa noocyo kala duwan oo ah qaabab video, DVD-yada, iyo VCDs. Xitaa ka sii badan, waa lacag la'aan in la isticmaalo iyo sii, oo ku timaadda Leaks ku salaysan u gaar ah diiwaanka. Waxaad isticmaali kartaa sidoo kale ciyaaryahanka VLC inay sii qulquli videos ka web ama inay webka. Waxaa qoreysa interface aad u aasaasiga ah, taas oo u fududaynaysa hore users waqtiga si aad u bilowdo, laakiin sidoo kale waa uun interface aasaasiga ah, sidaas darteed ma ahan xun jiidasho leh. Inta badan dadka ayaa waxa uu u adeegsaday leeyihiin wax la mid ah, in la yidhaahdo - sameeyaa waxa uu u malaynayay in.
Barnaamijkan ayaa sidoo kale ku guuleystay niinasaa, oo ka ciyaari kara kala duwan oo mahad videos in isagoo Kumaan weyn ee codecs in ay barnaamijyada. Waxay ku siinaysaa taxane ah oo fursadaha lagu jiro rakibo si ay u awoodaan si ay u astaysto si loo kordhiyo ku hadla iyo socdo bandhigga. Waxaad dooran kartaa noocyo kala duwan oo la jilci si ay u sameeyaan ciyaaryahanka si dhab ah idinkaa iska leh. Haddii aad xaq u guji ciyaaryahanka, waxaad dumin doonaa ilaa a-menu sub si aad u hesho fursado dheeraad ah. Waxaad qabsato karaan goobaha ay image inta lagu guda jiro loo maqli karo, sidoo kale.
Barnaamijkan wuxuu ku siinayaa lacag la'aan ah oo kala duwan oo codecs goldoloolooyinka galay aad Windows Media Player in siin doonaa inaad hesho badan oo dheeraad ah video iyo maqal ah qaabab ka hor inta badan aad sameeyey. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ciyaari VCDs, XCDs, iyo EVO cajalladaha qaab, sidoo kale, laakiin ma Blu-Rays aan barnaamij oo dheeraad ah. Halkii ay ka soo degsado barnaamij kale, kaliya aad kala soo bixi kartaa tan iyo waxa ay sii kordhineysaa in aad WMP. Waxa ay taageertaa labada qeexitaanka sare iyo heerka videos qeexidda. Marka aad ku shuban, waxaad leedahay labo ka mid ah fursadaha - caadiga ah ama faahfaahsan goobaha rakibo. By doorashada faahfaahsan, waxaad dooran kartaa si sax ah oo qaababka lagu rakibi doonaa. Xitaa in aad qabsato karaa audio u leedahay in codka ku wareejin.
Barnaamijkan freeware ayaa ku dhawaad ​​labaatan Milyan oo dadka isticmaala. Waa video iyo maqal ah ciyaaryahan oo wada qaadan kara tiro ka mid ah barnaamijyada iyo cajalladaha iyadoo in ka badan 270 codecs. Waxaa qoreysa fudud ah si ay u fahmaan interface, dhameystiran la hotkeys programmable iyo doorasho raadiyaha. Haddii aad bedesho fursadaha aad halka video ah waxa uu u ciyaarayaa, waxaad la kulmi doonaan dib u dhac ah. Versions Older ahaayeen draggy yara markii ciyaaro DVDs, laakiin update ah la sii daayay ayaa dhawaan waxaa loo qorsheeyay in la saxo dhibaatada. UMPlayer xamili karaan CD audio, DVD-yada, iyo VCDs.
By furitaanka xijaab Windows ku saabsan Mac, waxa aad furan kartaa dunida cusub oo barnaamijyo si ay u isticmaalaan. Kuwaas oo kaliya toban ka mid ah in xal kale Cineplayer jiraan, iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah waa lacag la'aan ah si ay isugu dayaan, si aad u arki karto mid la doonayo inuu kaliya waxa aad rabto sameeyo.
Sida loo View PowerPoint Muqaal on DVD Player
Aan shaqayn Downloadify at All? Isku day ay Alternative hadda
> Resource > bedelan karo > Top Toban Cineplayer DVD Decoder Badeli kara ee Mac